iSicelo se-Chiefs ngomgadli we-Downs - Ilanga News
Home Impilo iSicelo se-Chiefs ngomgadli we-Downs
IziMpofana sezifake isicelo sokuthenga uBongi Ntuli
IKAIZER Chiefs ifake isicelo kwiMamelodi Sundowns sokudayiselwa umgadli wale kilabhu ophila ngokubolekiswa emakilabhini ehlukene. ILANGA lithole ngemithombo yalo encikene kakhulu neChiefs ukuthi izidele amathambo yazilahla amakhahlambana kwiDowns ukuba ibadayisele uBongi Ntuli ongumgadli.
Lo mdlali ujoyine iSundowns kumasizini amathathu adlule esuka kwiLamontville Golden Arrows ebigencwe yizembe.
Udlale kancane kwiDowns kusaqala isizini yezi-2014/2015 kwathi maphakathi nayo wabolekiswa kumaZulu FC agencwe yizembe ekuwona. Ngesizini elandelayo yezi-2015/2016 ubolekiswe kwiPlatinum Stars abegijima kuyona nangesizini edlule. Udlale kahle okwenze waheha iso lamakilabhu amaningi yize ebukeka emancane amathuba okuthola isikimu kwiDowns kwazise ibophele ulozolo lwabagadli abagabe nangesipiliyoni sokugijima e-Afrika kubalwa u-Anthony Laffor, uLeonardo Castro, uYanick Zakri ukukha nje phezulu.
“IChiefs isixhumanile neSundowns ngendaba kaNtuli, izingxoxo zisaqhubeka phakathi kwala makilabhu,” kusho umthombo oqhube ngokuthi kulindeleke ukuba kuleli sonto uMike Makaab weProsport International ephethe uNtuli ahlangane nezikhulu zeChiefs ukubhunga ngezimfuno zalo mgadli uma egcina ngokujoyina le kilabhu.
IChiefs ivula ngokusemthethweni namuhla ngoMsombuluko njengoba ibihlabe ikhefu.
Nokho abadlali baqalile ngoLwesine ukuhlolwa ngodokotela bale kilabhu ukuthi basesimweni esihle yini sokuqala ukuzivoca kuleli sonto.
Kuthintwa uVina Maphosa wezokuxhumana kwiChiefs ngalolu daba, uthe: “Kanginalo ulwazi ngabadlali abasayiniswayo nabahambayo kwazise bengisekhefini. Ihhovisi livulwa ngokusemthethweni kusasa (namuhla ngoMsombuluko) ngakho okuningi ngizokwazi uma sengisemsebenzini.
“Nokho ngingakuqinisekisa ukuthi abadlali baqalile ukuhlolwa isimo sempilo ngoLwesine nangoLwesihlanu ukuze baqale ukujima kuleli sonto.”
UThulani “TT” Thuswa wezokuxhumana kwiSundowns, uthe ngokwazi kwakhe maningi kakhulu amakilabhu adlala kwi-Absa Premiership azimisele ngokusayinisa uNtuli kubalwa nePlatinum abebolekiswe kuyona.
Kuzo ezithinta abadlali abasha kwiChiefs, kuthiwa ukuphasile ukuhlolwa uPhilani Zulu ojoyine le kilabhu esuka kwiMaritzburg United kanti bese ejima neMaritzburg City kaBongi Hlophe. Kulindeleke aqale ukuzihlanganisa nale kilabhu namuhla ngoMsombuluko.
Previous articleIsasasa ngomdlalo weyeLANGA
Next articleKusolwa abadube eye-ANC